MAWDUUC 10: CESHO TAAN CUNUGA | Ung & Gravid
MAWDUUC 10: CESHO TAAN CUNUGA
In aad noqotid waalid adigoo da’yar ku jira waxaa waaye isbadal wayen nolosha ka mid ah. Dad badan ayaa khibrat u leh ilmo yaryar ayaga oo ka soo shaqeeyeen sida caruur ilaaliso iyo walaalo ka yaryar eyna haystaan xiiso ciyaal yaryar. In oo la noqdo hooyo misa aabo cunug adga dhashay si kastaba waxaa waaye wax kala duwan. Waxaad siin kartaa kul iyo farxad, dheedheel iyo faraxsanaan. Laakiin waxaa waaye mas’uuliyad wayen oo ku saran noloshaada dhan. Ma’noqatay waalid adigoo ku jira da’yar, waxaa gaar ahaan mi’hiimad ah in aad oggatid caawinaada aad ka heli kartit meesha aad joogtit.
Waxaa la heli karaa noocyo kala duwan oo eh dhaqaale la xiriira qofkii ilmo dhalo iyo qofkii kaliis daryeelka ilmaha haaysto. Kani waxaad ka’oggaan kartaa tusaale taqtarkaada. NAV trygd / www.nav.no (lacagta xafiiska caymiska dadweynuhu bixiyo) mise asaaska Amathea, Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.
Masruufka carruurta ee aabbuhu ama hooyadu siiso ilmaha aan isaga/iyada la noolayn
Cunuga aabahiis waxoo qasab ku yahay in uu masruufo cunuga hadii ey gabarta go’aansato in ey heeysato cunuga, iyo iyagoo isla deganeeyn. Si kasto haduu asaga jeclaan la haa in ey gabarta iska soo rido ilmaha. Masruufka waxoo bilaabanaa waqtiga aabaha shaqo bilaabo illaa cunuga ka gaaro 18 sano.
Caawinaad dhaqaalo xiriir ah waxey ku xirantahay xannaanada in ey wada heeysatiin labada waalid mise markeey gabarta mas’uuliyad ku tahay kaligeet xannaanada cunuga. Waa ku waan noocyo kala duwan oo caawinaad ah:
Lacag oo la siiyo markii ey waalidka ilmo ey dhalaan
Lacag hal mar taageero loo dhiibo
Lacag lagu taageero markiid aad da’ dhaaftit
Caaeinaad lacag cadaan ah
Uma baahna in dhaqaalo lacag kaligeed in la siiyo qoys cusub mise hooyo yaar in ey isku filnaadaan.Waxaa kale mu’hiim ah taageer ka imaaday qoyskooda iyo saaxiibo mise xiriir qofood.
Ka raadi internettka oo kahel caawinaad aad ka heli kartid hadiid la kulantid xaalado sidaan camal.
Ma bal baa in oo wiilka keligiis bixiyo masruufka cunuga markoo asaga jeclaa in ey gabarta iska soo riddo ilmaha?
Sidee bee kula tahay in ey gabarta qaado mas’uuliyada ugu wayen falka garaadxumi labadooda ka dhexeeysi.
Usii soco baabka kale >
>Ku saabsan dhalanyaronimo iyo xaamilonimo
2Uur – aniga xitaa?
4Ogeeysiin iyo caawinaad
5Sidee ey sidaan ku noqotey?
6Kalkaceel iyo xiiso
9Ilmo soo ridid
10Cesho taan cunuga
12Dib ugu fikiraad